सिन्धुपाल्चोकमा फेला पर्यो अनौठो रुख, काट्दा आउछ रातो रगत !! - Taja Report
Homeबिज्ञान प्रबिधिसिन्धुपाल्चोकमा फेला पर्यो अनौठो रुख, काट्दा आउछ रातो रगत !!
July 7, 2018 बिज्ञान प्रबिधि Comments Off on सिन्धुपाल्चोकमा फेला पर्यो अनौठो रुख, काट्दा आउछ रातो रगत !!
चौतारा : सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–३ फुलपिङकोटमा रामबुबा नामक अनौठो वृक्ष फेला परेको छ ।
त्यसको फल सुपारी जस्तो हुन्छ भने खाँदा बाहिरी भागमा नुनिलो र अमिलो तथा भित्री भागमा काँचो नरिबलको स्वाद हुने गरेको छ ।
उक्त रुखमा फलेको फलको वैज्ञानिक परीक्षण शुरु भएको छ ।
खाँदा मीठो लागेपनि एक÷दुई दानासम्म खाएमा केही नहुने र त्योभन्दा बढी खाएमा रिंगटा लाग्ने, वाक्वाकी लाग्नुका साथै झाडापखाला समेत लागी बिरामी पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर थापाले बताए ।
२०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बन्नु अगाडिदेखि नै त्यहाँ सो रुख रहेको र हाल त्यस रुखको संख्या ८० देखि ९० वटा रहेको छ ।
कसैले रामबुबा र कसैले राबुबा नामले पुकारिने सो रुखको काठ दाउरा कसैले पनि प्रयोगमा ल्याउँदैनन् ।
रामको नाम भएकाले अनिस्ट हुने आशंकामा स्थानीय कसैले पनि यस रुखलाई प्रयोग नगरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ रहेको छ ।
शुद्धि र आचमन: मन्दिरमा प्रवेश गर्नु अगाडि पुनः एकपटक शुद्धि गरिन्छ । शौचादिबाट निवृत्ति भएपछि पूजा, प्रार्थना गर्नुपूर्व आचमन गरिन्छ ।
घरमा सुतिरहेको बेला सर्पले टोकेर स्वस्तिमाको गयो ज्यान